အလံမှားလွှင့် | Mandalaygazette's Weblog
ဒီသတင်းလေး ဖတ်မိတော့၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ရီစရာလေး တွေ့လို့ လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာပါ။
– ဂျပန် ဘူတာ မှာ တိုင်ဝမ် နိုင်ငံခြားသား ဧည်သည်တွေကို ကြိုဆိုတာမှာ တိုင်ဝမ် အလံ နဲ့ မြန်မာအလံ မှားလွှင့်မိပါသည်။
– ၂၀၀၈ ဘေဂျင်း အိုလံပစ် မှာ ကွင်းထဲကို တိုင်ဝမ်အလံတွေ ယူခွင့်မရှိလို့ မြန်မာအလံတွေ အစားထိုးယူသွားကြတယ်တဲ့။
original link – http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2010/05/25/257891/Myanmars-flag.htm
Myanmar’s flag mistaken as Taiwan’s in Okinawa
TAIPEI, Taiwan — The Okinawa monorail station in Japan reportedly mistook the national flag of Myanmar as that of Taiwan,alocal cable TV station reported yesterday.
// // The TVBS reported thataTaiwanese tourist to Okinawa recently was surprised to find that Myanmar’s flag was mistaken as Taiwan’s flag at an Okinawa monorail station, and immediately called Taiwan’s Ministry of Foreign Affairs for clarification.
Myanmar’s national flag is 95 percent similar to Taiwan’s in the graphic designs and colors.
For Taiwan’s flag, the bright sunshine on the upper left corner represents equality, the blue sky implies freedom, and the red earth indicates universal love.
By contrast, also on the upper left corner of Myanmar’s flag, the rice plant spike represents the nation’s agricultural industry, gears indicates emerging industries, and 14 bright stars refer to 14 administration districts of the country.
It was reported that as Taiwan’s flag was banned from entering tournament sites during the 2008 Beijing Olympic Games, some people took in Myanmaran flags to asasubstitute for Taiwan’s to cheer Chinese Taiwan athletes.
← ရန်ကုန်မြို့ရှိ မင်္ဂလာဈေးကြီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား	ကပ်ဆိုက်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်က မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ် →
4 thoughts on “အလံမှားလွှင့်”
May 25, 2010 at 7:03 am Reply
ဖြစ်ရလေ မှားစရာရှားလို့ပာားပာား
ဒါပေမယ့် အလံတွေထဲမှာ မြန်မာအလံက အတော်လှတာ ။ ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်တာတော့မပာုတ်ဘူး
ရိုးရှင်းတယ် ။ အချိူးကျတယ် ။ လှတယ်။
May 25, 2010 at 7:19 am Reply
ထိုင်ဝမ် အလံ နဲ့ မြန်မာအလံက ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတာကိုး…
May 25, 2010 at 7:40 am Reply
စိတ်မပူကြပါနဲ့။ အခြေခံဥပဒေသစ်အရ ထိုင်ဝမ်နဲ့ဆင်တူတဲ့အလံကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးပါပြီတဲ့။
နောက်ဆို မှားမဲ့နိုင်ငံက အီသီယိုးပီးယားဖြစ်ပါတယ်။
မယုံရင်ကြည့်ပါ။ မြန်မာအလံသစ်နဲ့ အရောင်တွေတူနေပါတယ်။
May 26, 2010 at 2:22 am Reply
I proposeasexy model girl picture on the new flag under junta’s new constitution.